ATN: လူတကောင်၊ ကြောင်တယောက်နဲ့ ပြူတင်းပေါက်တချပ်
ပြူတင်းပေါက် ကနေ လာချောင်း သွားပါတယ် ... အစ်ကို့ စာတွေ ကို မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ထ် ၀င်းဒိုးစ်ကနေ ဖတ်ရတာ မို့ :P
have you met the guy at the window? if so, we can wait for the more writing on your walking :D
by the way, i haveacopy of DVD. it is the record on your mother's funeral and Yet Lel (traditinal ceremony one week after she passed away).
i will copy and post it to u inafew days.
Excellent touch, symbolizing the unexplainable condition with three objects.
ရသစာစု ဆိုတာထက် စိတ်အလျဉ်တွေ။လောက ဓမ္မ တွေ နဲ့ တွေးစရာတွေ ၊ အများကြီးပေးတဲ့ ၀တ္ထုတိုကောင်းတစ်ပုဒ်လိ်ု့ ဆိုချင်တယ်၊ character ဇာတ်ကောင်က နှစ်ယောက်ထဲပဲ ၊ ဒါပေမယ့် အဖြစ်အပျက်ပေါင်းများစွာကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်..
ဒါပေမယ့် မှတ်ချက်တော့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။
လူနှစ်ယောက် နှီုင်းယှဉ်ပြီး ရေးသွားတာ လှတယ် အစ်ကို။ နိဂုံးကလည်း လှတယ်။ အတွေးပွ့းစေတယ်။ ဒီဝတ္ထုလေး ကြိုက်တယ် အစ်ကို။
ပြူတင်းပေါက် ကြိုက်တယ်အစ်ကို။ အဲလိုပုံစံမျိုး တူးလည်း ရေးကြည့်ဖူးတယ် သိပ်တော့အားမရပါဘူး။ အစ်ကို့ဝတ္ထုကတော့ တကယ်မိုက်တယ်။
ကောင်းပါသည် ဘရာသာ ...